Lisitra ICO tsara indrindra 2022 | Lisitry ny fampandrenesana sy hevitra momba ny ICO | Serivisy lisitra ICO
Lisitra an-tserasera ICO - laharana 1 Lisitry ny lisitra ICO amin'ny 2022
ICO Listing Online dia iray amin'ireo tranokala lisitra 2022 ICO tsara indrindra izay manavao tsy tapaka ny momba ny ICO tsara indrindra tokony hampiasaina. Te handefa ny ICO amin'ny tranokalanay tsindrio ny Bokotra SUBMIT ICO eto ambany:
Ny tsara indrindra amin'ny ICO hampiasana vola amin'ny 2022 - Top ICO List 2022
ICO malaza indrindra
Farano ny ICO
Solidus Technologies dia naorina tamin'ny 2017 ho fikambanana mpitrandraka Ethereum ary manomboka Solidus Ai Tech ankehitriny. Solidus dia mamarana ny fananganana anatiny ny Eco Friendly High Performance Computing (HPC) Data Center & Infrastructure-as-a-Service (IaaS) sehatra ahafahan'ny Governemanta, Megacorps, SMEs & Professionals hividy serivisy Artificial Intelligence amin'ny alàlan'ny fampiasana azy. voalohany manerantany AI utility token (AITECH). Novambra 18, 2021 Aprily 30, 2022 9.9
Quarashi dia manome ny fahefana rehetra voalohany voarindra amin'ny sehatra iray mifantoka amin'ny: Chat Chat, Desentralized Exchange, IDO Launchpad, kitapom-bolan'ny Blockchain Interfaced Multi Crypto. Febroary 15, 2022 March 15, 2022 9.9
RastaSwap dia tetikasa entin'ny vondrom-piarahamonina. Izy io dia novolavolaina ho #1 Crypto Cannabis Ecosystem ary tetezana eo amin'ny tsenam-bola nentim-paharazana sy crypto. Desambra 21, 2021 March 1, 2022 9.4
Ny mpandray vola Revenue Coin (RVC) dia mamatsy vola ireo orinasa manana haitao avo lenta hamelabelarana ny varotra, ny varotra ary ny asa sosialy. Ny fanombohana mandray famatsiam-bola dia manokana hatramin'ny 10% ny vola miditra amin'ny fividianana RVC tsy tapaka amin'ny tsena, mampihena ny famatsiana ary mampitombo ny sanda. Oktobra 15, 2021 Desambra 5, 2021 9.8
YearnNFT Finance dia tsenan'ny NFT miorina amin'ny BSC hanodina sy hivarotra ny NFT's. YFNFT dia mari-pamantarana teratany BSC ambany famatsiana Novambra 19, 2021 Aprily 30, 2022 9.1
BERTINITY dia fanavaozana manakorontana ary ekôzistia blockchain tsy misy anarana tsy fantatra anarana ary tsy misy KYC. Ny ekosistema BERTINITY dia misy ampahany 5 lehibe, ao anatin'izany ny vavahady fandoavam-bola crypto, ny fifanakalozana afovoany, ny launchpad ICO, ny tsenan'ny tahiry fiarovana manerantany voadidy sy ny vola madinika. Oktobra 20, 2021 Janoary 17, 2022 9.2
Lahateny mivantana mivantana amin'ny sehatra mifototra amin'ny Blockchain Febroary 1, 2022 Aprily 30, 2022 9.6
Pawā dia token'ny Utility Multifunctional. Izy io dia manome safidy fihenam-bidy ho an'ny tompona fitaovana sy ireo izay mbola tsy nividy milina ASIC. Izy io koa dia ho lasa ampahany lehibe amin'ny HashEX sy ny protocole staking BeMine. Novambra 8, 2021 Janoary 31, 2022 9.5
AgroDeal Lab dia sehatra Fambolena Blockchain izay mampifandray ny tantsaha amin'ny tsena, ara-bola, fitaovana ary loharanon-karena Janoary 1, 2022 Enga anie 31, 2022 9.2
Sehatra ahazoana vola amin'ny Polygon
Mamolavola lalao hahazoana (p2e) lalao crypto amin'ny tambajotra polygon (matic) izahay. Janoary 15, 2022 Janoary 22, 2022 9.2
Frodo Tech dia tontolo iainana blockchain ara-bola ary mpikambana ao amin'ny Association Blockchain of New Zealand (BANZ). Manome tolotra ara-bola maneran-tany ny mpanjifanay tsy misy fetran'ny firazanana na faritra. Audited by certik. Desambra 1, 2021 Febroary 28, 2021 9.8
MyCryptoCity dia lalao finday mampiasa fotodrafitrasa Solana. MyCryptoCity dia lalao simulation izay ahafahan'ny mpilalao mahazo mari-pankasitrahana MYCTY amin'ny alàlan'ny fotodrafitrasa Solana. Ny mpilalao dia mandray ny fanapahan-keviny manokana amin'ny fanatanterahana hetsika sy hetsika maro avy amin'ny tontolon'ny fitantanana. Ny mpilalao dia mampivelatra ny tenany amin'ny fiezahana hampiasa tsara indrindra ny safidy maro, toy ny fandraisana mpiasa, ny fampiasana loharano, ny fifanarahana, ny fitantanana ny tanàna. Nahazo mari-pankasitrahana MYCTY izy. Janoary 1, 2021 Janoary 26, 2022 9.0
Ny sehatra smart contracts haingana indrindra. Ny protocol Cheetah dia manangana sarany ambany smart contracts sehatra blockchain afaka manatanteraka fifampiraharahana 110000+ isan-tsegondra. Febroary 1, 2022 March 1, 2022 9.1
Lucrosus Capital dia Renivohitra Venture Decentralized izay manome tombony ara-panjakana ho an'ny mpampiasa vola tsirairay amin'ny alàlan'ny marika - $LUCA. Janoary 17, 2022 Aprily 17, 2022 9.3
Brickken dia sehatra tokenization mifototra amin'ny blockchain mamela ny tokenize ny orinasa sy ny fananana, manome fahafahana ny mpampiasa vola hahazo vola miditra. Septambra 1, 2021 Febroary 28, 2022 9.2
Veritise dia manome serivisy fanamarinana, fanondroana, fanangonana angona ary fanadihadiana ho an'ny orinasa sy ny olona. Ny ivon'ireo fampiasa ireo dia ny blockchain Veritise Enterprise-grade amin'ny fahaizany mandrindra sy mitahiry tahiry azo antoka sy tsy miova. Septambra 3, 2021 Desambra 31, 2021 9.8
Ny IDO & IGO Launchpad voalohany miaraka amin'ny fidirana amin'ny fivarotana manokana ao amin'ny BSC (Binance Smart Chain) mifantoka manokana amin'ny tetikasa fanombohana tsena ambany. Janoary 1, 2022 Janoary 31, 2022 9.1
Miasa amin'ny famoronana rafitra ara-bola itsinjaram-pahefana ("DeFi") fehezin'ny marika "VGT" (Vingt) miaraka amin'ny tanjona hamenoana ny banga eo amin'ny habaka DeFi efa misy. Janoary 1, 2022 Aprily 30, 2022 9.6
ANB na Access Next Blockchain dia Layer 2 IBFT Protocol ary Bonsai Tries Data Architecture. Janoary 5, 2022 Febroary 5, 2022 9.1
Bamonyo no cryptocurrency amin'ny tetikasa rojo hotely maharitra izay ahitana trano kely marani-tsaina: Tiny Hotels. Ny token'ny utility Bamonyo no hany fomba hidirana amin'ny serivisy rehetra amin'ireo trano fandraisam-bahiny 10,000 izay kasainay haorina manomboka amin'ny taona 2022. Novambra 1, 2021 Desambra 31, 2022 9.6
Ownex (own) dia mari-pamantarana crypto decentralized izay miorina amin'ny blockchain Binance. Ireo tompona marika 500 ambony (tompony) dia hahazo tombony amin'ny 60% amin'ny tombom-barotra ownex.io, zaraina araka ny isany. Oktobra 17, 2021 Aprily 30, 2022 9
Ny ekôsistema GHA dia mampiditra ny fambolena tsara, ny sarintany momba ny tany fambolena, ny sensor IoT, ny rafi-pambolena mitsangana, ny faharanitan-tsaina momba ny toerana, ny rindrambaiko fitantanana ny voly, ary ny teknolojia fambolena hafa miaraka amin'ny teknolojia distributed ledger (DLT) ary ny fambolena blockchain amin'ny fambolena. Manana ny fahafahana tsy manam-paharoa hanatsara ny fahombiazany, ny mangarahara ary ny fahatokisana manerana ny rojo famatsiana hemp-fambolena izahay. Oktobra 26, 2021 Desambra 9, 2021 9.7
Ny token KIND dia natao hanahaka ny fividianana sy fivarotana diamondra amin'ny Internet. Famantarana ara-tantara io! Ny tanjon'ny famoronana an'ity token ity dia ny diamondra kohinoor dia tsy sombin'izao tontolo izao fotsiny. Raha ny marina dia maro amin'izy ireo no miendrika mari-pamantarana eto amin'izao tontolo izao. Ary ny olona rehetra dia afaka mitazona be an'io diamondra sarobidy io ao anaty poketrany. Oktobra 20, 2021 Desambra 5, 2021 9.4
Epsilon dia motera fikarohana tarihan'ny fiarahamonina, azo antoka ampahibemaso ary malalaka. Epsilon dia manana kitapom-bola itsinjaram-pahefana sy fifanakalozam-bola itsinjaram-pahefana. Mihazakazaka eo amin'ny sehatra Binance Smart Chain izy io ary marika BEP-20. Septambra 4, 2021 Desambra 13, 2021 9.5
Ny tena tanjonay dia ny hanova ny fisainan'ny olona iray sy ny fandrindrana ny fiainany, hampitombo ny androm-piainany, hitandro ny kalitaon'ny fiainana rehefa antitra. Desambra 9, 2021 Desambra 31, 2021 7.5
Dhabicoin dia andiam-pananana niomerika hampivondrona ireo tambajotra maro ho tontolo eksaistika tokana ahafahan'ny mpampiasa mifampiresaka, mianatra, mandoa vola, ary manao hetsika hafa isan-karazany. Ny tanjony dia ny hampiroborobo ny toekarena UAE ary hamolavola ny tsena manerantany. Septambra 24, 2021 Oktobra 25, 2021 9.6
Coinjoss dia mikendry ny hanome ireo mpampiasa traikefa tsy misy tohiny amin'ny fitantanana ny volapetrany. Coinjoss dia tontolo iainana iray manontolo izay manomboka amin'ny sehatra fifanakalozam-bola haingana, mifantoka amin'ny interface mora ampiasaina ho an'ireo mpampiasa mba hanakalozana ny volany amin'ny taha ambony indrindra amin'ny tsena. Oktobra 15, 2021 Novambra 30, 2021 9.6
Ny Nexxus Rewards dia manome vahaolana ara-barotra iraisana eo amin'ny fiaraha-monina izay mampiakatra ny fiaraha-monina iray manontolo. Manampy ireo fikambanana mpanao asa soa any an-toerana sy fikambanana tsy mitady tombom-bola hamatsy vola ny antony ara-tsosialy manan-danja amin'ny famoriam-bola maharitra maharitra izay mametraka vola ao amin'ny kaontiny any amin'ny banky isan-kerinandro avy amin'ireo mpiantsena izay miantsena foana. Janoary 16, 2020 Janoary 22, 2020 7.8
2 eo an-toerana
2local dia manolo-tena amin'ny fanavaozana sy ny orinasa maharitra amin'ny fikarakarana ny tontolo iainana sy ny toetrandro, ny asa marina ary ny fitomboan'ny harinkarena. Miaraka amin'izany dia te-handray anjara amin'ny fiaraha-miasa vaovao manerantany i 2local izay ilaina hanatanterahana ny tanjon'ny Firenena Mikambana. Ho fanampin'izay dia mila ny hetsika ny rehetra! Oktobra 17, 2019 Desambra 31, 2019 9.9
Encores dia saika hanova ny toe-tsainan'ny orinasa iray-fidiram-bola ary hizara tombony indray ho an'ireo mpampiasa amin'ny fanomezana valisoa azy ireo amin'ny Internet na fanaovana asa tsotra hafa, toy ny tambajotra sosialy, doka sns Oktobra 1, 2019 Enga anie 31, 2019 7.5
Mampiditra ny maha-Robin. Mametraka ny fitokisana amin'ny filokana. Septambra 14, 2019 Febroary 2, 2020 8.9
Flas Exchange dia sehatra varotra feno izay manolotra karazana fananana nomerika isan-karazany. Amin'ny maha sehatra azo antoka, azo itokisana sy mandroso fananana dizitaly novolavolaina ho an'ny varotra matihanina, Flas Exchange dia hamolavola endri-javatra mandroso hihaona amin'ny takiana manam-pahaizana manokana sy sarotra. Novambra 8, 2019 Febroary 9, 2020 8.3
GRAYLL dia nozaraina Ledger Technology, AI ary Machine Learning nampiharina tamin'ny rafitra ara-bola algorithmic izay mamorona tombony azo avy hatrany, azo alefa amin'ny alàlan'ny fampiharana finday sy tranonkala tsotra. Izahay dia mifantoka amin'ny fananana nomerika sy ny tsena fananana tokenized. Ireo rafitra dia azo ampiharina amin'ny zavatra rehetra, ohatra ny entam-barotra, ny zavakanto, ny trano, ny refin'ny toetr'andro, ny angona fironana amin'ny haino aman-jery sosialy sns. Jolay 1, 2019 Febroary 17, 2020 9.1
HiveNet dia hanome ny vahaolana ara-teknolojia hampiasa ireo fotoana informatika tsy miasa ireo amin'ny alàlan'ny fananganana tambajotra informatika voazara. Io dia ahafahan'ny tompona solosaina mahazo tombony amin'ny fotoana tsy misy fototr'ireo solosain'izy ireo Septambra 24, 2019 Novambra 23, 2019 7.9
Mindsync dia sehatra iray ary vondrom-piarahamonina manerantany momba ny mpamolavola fianarana milina, mpahay siansa angona ary manam-pahaizana AI mihatra. Ity vondrom-piarahamonina ity dia afaka hiara-miasa ary handray anjara amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsirairay sy ny ekipa hamahana olana isan-karazany. March 1, 2019 Aprily 30, 2021 10.8
Pawtocol LLC, orinasa iray manana andraikitra voafetra ao Delaware ("Pawtocol", "we", "our", "us") dia mikendry ny hampiditra ny indostrian'ny fikarakarana ny biby fiompy ao anatin'ny vanim-potoana blockchain amin'ny alàlan'ny famolavolana sehatra misy toekarena sy tontolo iainana mifantoka amin'ny biby. Ity taratasy ity dia mamaritra ny fahitanay sy ny filozofia ao ambadiky ny Pawtocol sy ny antony itondrantsika ity tetikasa ity eny an-tsena, ary koa ny fivoarantsika mandraka ankehitriny ary ny antony maha ekipa marina tokony hampiharinay. Jolay 1, 2018 Desambra 31, 2018 7.9
SynchroBit ™ dia iray amin'ireo tetik'asa lehibe amin'ny maodely ara-bola ao amin'ny ekosistema SynchroSphere®, izay manome ny hazondamosina toekarena amin'ireo tetik'asa hafa sy modules an'ny tontolo iainana. Ny sehatra dia ho tafiditra tanteraka amin'ireo sehatra ara-bola hafa an'ny SynchroSphere® hamoronana traikefa mpanjifa tsy misy tomika ary hanome ny mpampiasa tontolo iainana mahomby sy mahomby ary azo antoka mifototra amin'ny teknolojia blockchain sy cryptocurrency. Aogositra 1, 2019 Desambra 28, 2019 8.2
TecraCoin dia mikasa ny fampandrosoana ny Tecra Investments amin'ny ho avy. TecraCoin dia manan-jo hanova ireo drafitra ireo na tsy hampihatra azy ireo amin'ny fahaizany irery. Janoary 17, 2019 Janoary 16, 2020 7.2
Ny tetikasa CoinCasso dia vahaolana holistic sy demokratika noforonina ho an'ny olona. Hafa tanteraka ny fomba fijerinay satria tianay ny vondrom-piarahamonina afaka manapa-kevitra sy mitaona ny fivoaran'ny fifanakalozana sy ny indostria iray manontolo. Izany no antony anomezantsika ny mpisera fahafaha-miasa ho tonga mpiara-tompon'ilay tetikasa CoinCasso. Oktobra 21, 2018 Desambra 31, 2019 8.2
Ny tetik'asa Karuschain dia mikendry ny hikasika ny ankamaroan'ny fampidirana sy vokatra avoakan'ny rojom-pamokarana metaly sarobidy ankehitriny. Ny sehatra Karuschain dia novolavolaina mba hanalefahana manokana ny olana sy ny fanamby atrehin'ireo mpandray anjara rehetra amin'ny rojom-pamokarana metaly sarobidy. Janoary 14, 2020 Febroary 14, 2020 7.2
Ambaratonga 01 (LVX)
Level01 no fifanakalozana Derivatives Derivatives 1st 2st Peer to Peer (P01P) manerantany miaraka amin'ny haitao sy ny fitrandrahana varotra artificience (AI) eo amin'ny Blockchain. LevelXNUMX dia manararaotra ny teknolojia blockchain sy cryptocurrency, mba hamoronana sehatra fifanakalozana sy fifanakalozana derivatives (options) izay ahafahana manao varotra ara-bola amin'ny forex, stock, commodities ary cryptocurrency amin'ny fifanakalozana peer-to-peer, tsy mila mpanelanelana mpanelanelana. Jolay 1, 2018 Desambra 31, 2018 9.1
Ny SaTT dia mari-pamantarana azo ampiasaina mifototra amin'ny teknolojia blockchain izay mamela ny fifanakalozana doka sy ny fandoavam-bolan'ny mpihaino. SaTT dia fehezin'ny Smart Contract izay manisy lisitra ny tolotra dokam-barotra miaraka amin'ireo angon-drakitra voatahiry tsara ao amin'ny blockchain Ethereum. Ny Smart Contract dia mamaritra ny fepetra fandraisana anjara amin'ny fampielezan-kevitra, mamaritra ny fahombiazana ary manome antoka ny fanisana farany. Enga anie 1, 2018 Desambra 31, 2020 8.3
Gath3r dia mandray fomba vaovao amin'ny fitrandrahana ao anaty tranonkala amin'ny alàlan'ny fampidirana vola madinika marobe marobe miaraka amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Ny vola madinika GTH dia miasa tsara amin'ny mpizara sy amin'ny fampiharana, ary tsy manana olana UI, ka mamela ny vola vaovao sy misy hampiasana ny hashrate an'i Gath3r. Janoary 9, 2020 Janoary 11, 2020 6.3
Ny vahaolana Bethereum dia mampiasa ny haitao Blockchain hiantohana ny filokana azo antoka sy azo antoka indrindra. Tsy misy olona afovoany tafiditra amin'izany: Ny mpilalao dia mamorona filokana, mametraka ny lalàna ary manome ny vola azo antoka hanatanterahana ny karama. Ny Smart Contract dia miaro ny vola ary mizara ho azy arakaraka ny fepetra sy ny valim-pifidianana. Oktobra 1, 2018 Desambra 31, 2018 8.4
IBNIF CINEMADROM - Ity ny tambajotra International Blockchain Network of Independent Cinematographers, izay miorina amin'ny fotodrafitrasa vaovao, sy ny foto-kevitry ny fifanakalozana eo amin'ny mpandray anjara amin'ny famokarana sarimihetsika, mpanoratra, mpamokatra, manampahaizana manokana, mpampiasa vola ary mpijery. Amin'ny fotony, IBNIF CINEMADROM dia mampiasa teknolojia blockchain Febroary 3, 2020 Aprily 30, 2020 6.9
MyTVchain no sehatra fahitalavitra tranonkala voalohany natokana ho an'ny klioba fanatanjahan-tena sy atleta, ary ankehitriny dia manambara ny fisokafan'ny fantsona fahitalavitra Internet En France, fahitalavitra The Sports Movement. Ity fantsona ity dia natolotry ny fandraisana andraikitry ny komity olympika sy fanatanjahantena nasionaly frantsay (CNOSF), ary natokana hampiroborobo ny taranja rehetra, ny federasiona rehetra ary ny klioban'izy ireo. Febroary 29, 2020 March 27, 2020 6.1
BILLCRYPT pl dia rafitra fampidirina-maso tsy miankina amin'ny fanjakana ho an'ny birao Blockchain-Representative (BR). Fotodrafitrasa tokana misy fotodrafitrasa tokana mampivondrona ireo biraon'ny Representative Blockchain amin'ny endrika fampiharana tsy miankina amin'ny blockchain (DApp). Sehatra tokana mampifangaro ny tombony rehetra amin'ny tontolo tena izy sy ny habaka virtoaly, ny Internet mahazatra ary ny blockchain. Jolay 3, 2019 Aprily 23, 2020 7.4
Te-hahita lisitra ICO koa ve ianao?
Tanisao ny ICO androany ao amin'ny tranokalanay ary mahatratra mpampiasa vola an'arivony manerana izao tontolo izao. Jereo ny lisitray sy ny fonosana fampiroboroboana amin'ny fipihana ny MILA ICO bokotra.
Inona ny lisitra ICO an-tserasera?
ICO Listing Online no vondrom-piarahamonina lehibe indrindra misy ny olona manisy lisitra ny ICO nanomboka ny taona 2018, manavao ny mombamomba anay izahay momba ny farany farany ICO misy eo amin'ny tsena. Betsaka ny tranokala lisitra ICO misy amin'ny Internet fa tsy ny rehetra no azo antoka sy azo antoka hampiasa vola satria ny ankamaroan'izy ireo dia tsy havaozina matetika.
Ireo mpampiasa vola izay liana amin'ny fampiasam-bola amin'ny ICO. Azon'izy ireo atao ny manamarina ny naoty ICO ao amin'ny tranokalanay ary avy eo mampiasa vola satria hanampy azy ireo hikaroka tsara indrindra Active, Pre & Ny ICO ho avy.
Inona no atao hoe ICO?
Ny ICO, na Fanolorana vola voalohany, indraindray antsoina koa hoe "varotra famantarana" na "fanolorana token voalohany", dia fomba fanao amin'ny famoriam-bola ho an'ny tetik'asa blockchain, izay misy cryptocurrency na token omena ny mpampiasa vola voalohany, alohan'ny lisitra eo amin'ny tsena lehibe kokoa. , toy ny fifanakalozana.
Manoro hevitra anao ny hanao fikarohana marobe manodidina ny tetikasa alohan'ny fampiasam-bola. Anisan'izany ny famakiana ny whitepaper, amin'ny famitana raha manome ny lanjan'izao tontolo izao ny ICO ary manadihady amin'ny antsipiriany ny ekipa.
Ity ny fomba ahafahanao mandray anjara amin'ny ICO:
Manana ny cryptocurrency mifandraika izay eken'ny ICO ho fampiasam-bola.
Hamarino tsara fa mifanaraka amin'ny marika ICO ny poketra cryptocurrency.
Zahao Triple ny adiresy fametrahana avy amin'ny loharano ofisialy.
Inona ny ICO Soft Cap?
Nahazo ny tanjony ny ICO iray rehefa tratra ny satrony malefaka. Ny satroka malefaka dia vola kely takiana mba handrosoan'ny tetikasa.
Inona no atao hoe Hard Hard ICO?
Ny ankamaroan'ny ICO dia hanana satroka mafy ihany koa, izay ny habetsany farany horaisin'izy ireo amin'ny fampiasam-bola. Raha tsy mahatratra ny satrony malefaka ny ICO, ny ankamaroan'ny ICO dia hamerina vola amin'ireo mpampiasa vola.
Inona ireo famantarana ny ICO?
Ny mari-pamantarana dia azo faritana ho fananana crypto navoaka tamin'ny orinasa iray izay mamatsy ara-bola ny tetikasa amin'ny alàlan'ny ICO, izay mety ho fitaovana fandoavam-bola (singa monite) ao amin'ny tontolo iainana ihany no manome endrika mitovy amin'ny vola madinika, fa ny tompony koa dia manana zon'ny hafa ao amin'ny tambajotra , toy ny zo hifidy, ny zon'ny dividend, ny zon'ny ampahany amin'ny fidiram-bola, sy ny hafa. Ny famantarana dia noforonina ho fifanarahana "marani-tsaina" mifototra amin'ny tambajotra blockchain Ethereum na Wave. Ny mari-pamantarana dia azo ekena ho fitaovana ara-bola na entam-barotra (na serivisy) izay azon'ny tompon'ny mari-pamantarana (utilities), miankina amin'ny toetran'ny cryptocurrency.
Inona no atao hoe whitepaper ICO?
ICO Whitepaper dia antontan-taratasy navoakan'ny fikambanana / orinasa iray izay mamoaka famantarana mba hanangonana vola hamatsiana tetikasa manokana. Tsy misy atiny voafaritra araka ny lalàna tokony hihaonan'ny whitepaper iray. Matetika ny antontan-taratasy dia misy fampahalalana momba ny fizotry ny famoahana ny mari-pamantarana, ny mombamomba ny tetikasa izay hapetraka, ary koa ny ekipa ao ambadiky ny tetikasa.
Ahoana ny fiasan'ny fanolorana vola voalohany (ICO)?
Ny ICO dia manomboka amin'ny karazana fanambarana, izay matetika antsoina hoe taratasy fotsy izay mamaritra ny antsipirian'ny tetikasa, ny drafitry ny tetikasa, ny Tetibola ary ny tanjona ary ny adihevitra sasany momba ny fomba fizarana vola madinika na token. (Matetika ny mari-pamantarana dia avoaka hanehoana ny fananana tetikasa na fikambanana mahaleo tena itsinjaram-pahefana, fa ny vola madinika dia fananana matetika.)
Ny ankamaroan'ny ICO dia mamaritra ny isan'ny mari-pamantarana na farantsakely natolotra talohan'ny fivarotana. Ireo mpamatsy vola izay mividy aloha dia azo omena fe-potoana tombony amin'ny alàlan'ny fandoavana ny vidiny ambany isaky ny farantsa. Saingy afaka miovaova ny vidiny, ary raha betsaka ny olona mividy dia mety ho vitsy kokoa ny mari-pamantarana anao.
Ny sasany amin'ireo ICO dia manana tanjona manokana amin'ny fitadiavam-bola ary afaka mitazona ny vidiny mandritra ny fivarotana. Ny sasany mitazona ny famatsiana tsy miova ary manitsy ny vidiny mifototra amin'ny fangatahana, mitombo araka izay azo atao ary misy ihany koa ireo manome fanaterana mavitrika rehefa misy vola vaovao noforonina rehefa misy mividy iray.
ICO marobe no natomboka tsy miankina, tantanan'ny fikambanana mpanome ao amin'ny tranokalany na ny sehatra misy azy io. Nitranga izany satria ny tolotra azo itokisana kokoa matetika dia entin'ny serivisy fifanakalozana na serivisy ahafahana mamela ny mpampiasa vola fepetra fiarovana amin'ny scammers.
Fahasamihafana lehibe eo amin'ny ICO sy ny IPO
Ny fanolorana ho an'ny daholobe voalohany (IPO) dia dingana iray mitovy amin'ny ICO izay ahazoan'ny mpampiasa vola mizara ny fananan'ny orinasa. Mifanohitra amin'ny ICO izany, izay ahafahan'ireo mari-barotra novidian'ny mpamatsy vola manampy lanja raha toa ka mandeha tsara ny orinasa.
Ho an'ny ICO, ny mpampiasa vola dia mividy vola crypto vaovao miaraka amin'ny fikasana hahazo tombony rehefa mitombo ny sandany. Izy io dia mitovy amin'ny olona iray izay mahazo tombony rehefa miakatra ny stock novidian'izy ireo tamin'ny stock exchange. Ny ICO dia tsy mitovy amin'ny fividianana anjara amin'ny tsenambola satria rehefa mampiasa vola amin'ny token vaovao ianao dia tsy afaka mizara tompona orinasa.
Fa maninona no malaza ny fidiram-bolan'ny ICO?
ICO dia kinova crypto nomerika an'ny crowdfunding. Nampiasaina tamin'ny fomba mandaitra mba hamatsiana vola crypto, izay tena mahomby ankehitriny ary nanangona vola be izay tsy ho vitan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny famatsiam-bola mahazatra. Ireto misy ohatra sasany amin'ny tetik'asa mahomby amin'ny famoriam-bola ICO: Stratis, Ethereum, Iota, Viberate & Edgeless
Ahoana ny fampiharana ICO?
Orinasa Crypto-currency maniry hanangona vola amin'ny alàlan'ny ICO dia mila manome fampahalalana sasantsasany, ao anatin'izany ny famaritana ny tetikasa, ny tanjon'ny tetikasa, ny fepetra takiana amin'ny fampiasam-bola, ny ampahan'ny mari-pamantarana izay tazomin'ny orinasa, ny fe-potoana ny tetikasa ICO sy ny karazana vola virtoaly eken'ny tetikasa.
Mendrika handray anjara amin'ny ICO ve ianao?
Ny tena zava-dehibe dia ny fahafantarana fa manambola vola amin'ny hevitry ny olona ianao, izay mety tsy dia mendrika akory. Etsy ankilany, ny sehatry ny cryptocurrency dia mirongatra ankehitriny. Ity dia sehatra mampanantena hahazoana karama be, ary raha tsy tianao ny tsy hahita ny vintana dia mandroso anio.
Fampiasam-bola amin'ny ICO
Ny ICO Investments dia samy manana tombony sy fatiantoka lehibe raha oharina amin'ny Investments dia efa voatanisa cryptocurrency. Noho izany, ireo mpampiasa vola mahay, izay mividy cryptocurrency vaovao amin'ny ICO faran'izay haingana, dia afaka manantena ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ohatra, ireo izay nanambola tamin'ny Ethereum ICO tamin'ny 2014 dia nahazo tombony lehibe. Tao anatin'ny 42 andro dia vola 18 tapitrisa dolara amerikana no narotsaka. Nisy Ether iray natakalo tao amin'ny ICO nandritra ny 30 cents. Na dia misy ny lisitra voalohany amin'ny fifanakalozam-bola aza, ireo mpampiasa vola dia faly tamin'ny fisondrotana zato isan-jato. Ankehitriny ny cryptocurrency Ethereum dia ny Coin no vola farany matanjaka indrindra eo amin'ny tsena ary amidy manodidina ny $ 100 izao.
Tombontsoa amin'ny fampiasam-bola ICO
Mampanantena tombony lehibe handresena ny ICO
Izay mikaroka ny ICO dia hianatra momba ny mety ho fampiasa amin'ny teknolojia Blockchain
Ny mpampiasa vola dia mitaona ny famolavolana ny tontolon'ny crypto-business
Ny fandraisana anjara amin'ny ICO dia mahitsy
Ny fatiantoka ny fampiasam-bola ICO
Tranga hosoka maro no mampidi-doza be ny fandraisana anjara amin'ny ICO
Ny Wallet dia tsy maintsy andraisana anjara
Ny pre-fikarohana dia soso-kevitra mafy, mila fotoana be dia be izany
Amin'ny tsenan'ny bera mitohy, sarotra be ho an'ny Startups ny mametraka ny tenany
Ity ny fomba ahafahanao mampiasa vola amin'ny ICO:
Mba hampiasa vola amin'ny ICO dia tsy maintsy mamaky ny tranokalanay izahay hahitanao ireo tetikasa mety hampanantena izay mitaky famatsiam-bola. Raha vantany vao mahita ny lisitry ny tetikasa ahafahanao mahita ny fampiasam-bolanao dia mila mandeha any amin'ny tranonkalany izy ireo hividy ny mari-pamantarana.
Raha jerena fa ny cryptocurrency dia mitazona crypto, fa tsy amin'ny vola Fiat, ilaina ny manakalo vola amin'ny cryptocurrency (indrindra ny Etherium).
Mamindra ny cryptocurrency amin'ny tetikasa ary mahazoa fanamafisana ny fandraisana anjara
Makà vola madinika amin'ny tetikasa amin'ny kitapom-bola crypto
Famerenana ny vola madinika amin'ny fifanakalozana crypto
Rehefa tratra ny vidiny mifanaraka amin'ny mpampiasa vola dia tanterahina ny varotra sy ny fanitsiana ny valim-bola
Dingana fivarotana ICO
Ny dingana fivarotana ICO dia misy dingana iray izay mijery ny resaka fanangonam-bola ary rehefa apetraka amin'ny tsena ny fananana dizitaly ho toy ny «blockchains» izay mitovy amin'ny ampaham-bidy izay fantatra amin'ny anarana hoe token natolotra tamin'ny vidiny fihenam-bidy azo takalo ho an'ny lisitra ico cryptocurrency nataon'ny mpamatsy vola taloha nandritra ny dingana fanombohana tetikasa iray. Manome ny lisitra ico ambony. Ireto ny dingana telo amin'ny fivarotana ICO:
Dingana I FIVAROTANA PRIVATE
Dingana II PRESALE
Dingana III FIVAROTANA VAHOAKA
Na izany aza, tsy misy fitsipika napetraka izay manapa-kevitra ny amin'ny firafitry ny fitomboan'ny crypto ico mafana. Tamin'ny voalohany, nandritra ny dingana I, dia nambara ny fivarotana efa vita mialoha sy manokana fa vao manomboka mifanakalo lisitra voalohany ny dingana II ary avy eo tonga ny dingana III izay vonona ny hividy ny mariky ny besinimaro hahazoana vola bebe kokoa.
Lisitra ICO ho avy tsara indrindra:
Manana an lisitry ny ICO ho avy izay hihetsika tsy ho ela. Manana fizarana hafa izahay hanehoana ireo ICO farany ho avy.
Lisitry ny ICO aktif:
Raha te hahita ny lisitry ny ICO mavitrika indrindra dia tsy mila mandalo ireo tranonkala isan-karazany ianao izao. Izahay dia manome ny lisitra izay havaozina matetika.
Lisitry ny Pre-ICO:
Ny Pra-ICO dia mora vidy ary izy ireo koa safidy tsara ahazoana tombony haingana. Amin'izao fotoana izao, malaza eo amin'ny mpampiasa vola izy ireo satria mahazo bebe kokoa. Noho izany, jereo ny anay Lisitry ny Pre-ICO amin'izao fotoana izao.
Tanisao ny ICO anio ao amin'ny tranokalanay ary tongava amin'ireo mpampiasa vola an'arivony manerana izao tontolo izao ary koa, izao izahay dia manome serivisy KYC haingana indrindra ho an'ny ICO. Fenoy ny taratasy fifandraisanay anio ary hifandray aminao izahay ao anatin'ny 24 ora manaraka.